Labo Nin oo geystay kufsi aan hore loo arag oo Baydhabo lagu toogtay | Keydmedia
Labo Nin oo geystay kufsi aan hore loo arag oo Baydhabo lagu toogtay
Labadaan nin ayaa maanta lagu toogtay fagaare ku yaallo Baydhabo kadib markii lagu helay fal shareecada Islaamka ka baxsan.
BAYDHABO, Soomaaliya - Maamulka Koofur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta fagaare ku yaalla magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ku toogtay labo ruux oo lagu helay fal fool xun, oo khilaafsan shareecada suuban ee Islaamka.
Labadaan ayaa lagu eedeeyay in wiil yar oo 9 jir ah kula kaceen falka Qowm-kii la halaagay ee "Luud" bilooyin ka hor, kaasoo fajac iyo amakaag ku noqday bulshada ku nool deegaanada Koofur Galbeed iyo guud ahaan gayiga Soomaaliya.
Qoraal uu soo saaray Wasiirka Wasaaradda Cadaalada Koonfur Galbeed Maxamud Xuseen Xasan ayuu ku sheegay in maamulka marnaba uusan ogolaan doonin in deegaanka laga sameeyo fal fool xun oo ka hor-imaanaya Diinta iyo dhaqanka.
Ragaan xukunka lagu fuliyay ayaanan Maxkamad la soo taagin, waxaa uuna maamulka Koofur Galbeed sheegay in dilka lagu fuliyay labadan nin kadib markii ay afkooda ka qirteen dembiga, arintaana ay qeyb ka tahay suulinta falalka noocaan oo kale ah oo deegaanka ku soo batay.
Toogashada ayaa ku soo aadeyso xilli shalay magaalada Baydhabo laga soo wariyay in ilmo da'dooda ka yartahay 10 sano jir oo labo ahaa la fara xumeeyay, kadibna midkooda uu dhibaatada u geeriyooday, iyadoo dembiilayaasha ay goobta ka baxsadeen.
0 Comments Topics: koonfur galbeed kufsi
Booliska oo xog cusub ka bixiyay kufsigii iyo dilkii Xamdi
Warar 15 September 2020 16:40